I-WOWOW Pink Bathroom Sink Faucet - Ompompi Basekhishini Abangcono Kakhulu 2021 | Ompompi Basegumbini Lokugezela Abangcono Kakhulu | I-WOWOW Faucets
Kubonakala sengathi kufanele ihlale isikhathi eside, futhi i-faucet uqobo iyinsimbi, hhayi ipulasitiki eshibhile eshibhile. Ngijabule ngakho futhi ngingancoma nakanjani ukuthi ngiyayithanda indlela eyakhiwe ngayo, ibukeka inkulu njengoba isebenza.
Awukwazi ukungahambi kahle ngale sethi! Zenziwe kahle kakhulu futhi zinomsebenzi osindayo ngentengo ebengingayilindele. Sibheke kwaDepho yasekhaya naseLowes ukuthola ompompi bamasinki abamnyama kuqala. Azikho ezazicishe zibe zinhle futhi zonke okungenani zaziphindwe kabili noma kathathu ngentengo. Saneliseke KAKHULU ngalesi sethi!
Ngithanda ikhwalithi yezinto ezisetshenzisiwe nokulingana okuphelele nokuqedwa. Ngijabule ngokuthenga kwami. Ukufakwa kuhambe kahle, ngaphandle kwalokhu okulandelayo.
Kuhle kakhulu futhi ukuqeda kuphelele. Ikhwalithi ephezulu nokubukeka okuhle
Lompompi obomvana ubukeka umuhle kakhulu.I-punchline endlini yami yokugezela